I-Cove, i-Scenic yeNdlu encinci-ii-Queen ezi-2-Igcinwe kakuhle
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguBlake
**Nceda uqaphele: asikagqibi ukuphucula ipropati.**
Le ndawo imangalisayo yokubaleka entlango yindawo efanelekileyo yokumisa kubo bobabini abahambi kunye nabahambi, ngokufanayo. Ibekwe yodwa ngokugqibeleleyo, kodwa ngokoqobo umzuzu om-1 ukusuka kwiFreeway.
Indlu encinci ibonelela ngemibono emangalisayo yentlango kunye neenduli, kunye nokutshona kwelanga kunye neenkwenkwezi njengoko ungakholelwa.
Ngaphakathi uya kufumana izibonelelo ezininzi. Ikhitshi ixhotyiswe kakuhle kwaye igcwele.
Embindini kwiiPaki zeSizwe.
Gcina ukhumbula, le yindlu encinci kakhulu "indlu encinci enamavili" (iinyawo ezi-8 ngeemitha ezingama-20 okanye ii-160 zeenyawo).
Le Ndlu iNcinane yakhiwa ndim kunye nezinye iingcibi ezi-2 ezichubekileyo.
Ikhululekile kakhulu ngeAC / ubushushu obugqwesileyo. Inezixhobo eziqhelekileyo, ngoko ke umbane ongenamkhawulo, i-AC / ukufudumeza, kunye namanzi. Indlu yangasese eqhelekileyo (akukho zindlu zangasese zomgquba ezingaqhelekanga). Ishawari (nangona incinci) inamanzi amaninzi ashushu njengekhaya eliqhelekileyo.
AWUFUNI ukuncama nantoni na ukuze wonge amanzi okanye amandla.
Iimpawu ze-Smart-home ziquka i-smart-lock, izibane ezimnyama, i-Roku Smart TV kunye ne-Amazon Alexa yomculo.
Kukho i-intanethi ethobekileyo, ke ungalindeli okuninzi kuyo, kodwa uhlala ukwazi ukusasaza ngenkcazo ephantsi.
Ikhitshi esebenza ngokupheleleyo igcwele i-snacks kunye nezibonelelo zokutya. Unayo yonke into oyifunayo. Isinki enkulu, imicrowave eqhelekileyo, kunye nefriji / isikhenkcezisi esiphakathi. Kukho i-toaster, ipleyiti eshushu, kunye neembiza/iipani. Kukho isitovu esiphathwayo esincinci, kodwa hayi isitovu esigcweleyo.
Igumbi lokuhlala linesofa (ekwayibhedi yesofa kaKumkanikazi), kunye neTV enkulu. Iimbono ezimangalisayo kwifestile enkulu yemifanekiso.
Umgangatho omfutshane, ofikelelwa ngeleli, unebhedi enkulu yokumkanikazi, iifestile ezininzi, kunye neendawo zokutshaja ze-USB.
Ngaphandle kukho indawo yokucima umlilo (izitulo zenkampu ngaphakathi). Sigcina iinkuni kufutshane, kwaye sidla ngokuba neemarshmallows, iicrackers zegraham, kunye netshokolethi yokwenza iiS’mores.
Indawo yaseCove Fort ineSiza seMbali saseCove Fort kunye neChevron ngaphesheya kwe-I-15. Kungenjalo kukho nje iqaqobana le-off-grid, abamelwane abazimeleyo kwintlambo yonke. Esi siza sikwicala laseNtshona kuhola wendlela kwaye akukho nto ingako ngaphandle koluhlu oluvulekileyo kunye nomhlaba wengca. Uninzi lwayo lunemihlaba yeBLM engahlali mntu. I-antelope yabahlali i-skittish kodwa iza rhoqo. Zikhangele kwakusasa. Unokuzibona ezinye.
Ukuzihlola ngumgangatho wethu. Sazise ukuba unokhetho kwaye ungathanda ukudibana nathi ngokobuqu.
Ucango lunesitshixo esinesmart pad. Siza kusebenzisa amanani ama-4 okugqibela enombolo yakho yefowuni okanye usithumelele inombolo eneedijithi ezi-4 esikhethiweyo kwaye siya kukulungiselela yona. Yonke into iya kulungiswa ngaphambi kwexesha lokufika kwakho. Singabakho xa singena ukuba uyathanda, njengoko sithanda ukuthetha nabahlobo bethu be-AirBNB.
Zive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi nanini na. Kuya kufuneka sisebenze kwindawo ethile okanye kufutshane ukuba kukho into efunekayo.
Ucango lunesitshixo esinesmart pad. Siza kusebenzisa amanani ama-4 okug…